Green Card အင်တာဗျူးအတွက်သင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
စာရေးသူ DVLottery.me 2020-06-05
ငါယူအက်စ်အစိမ်းရောင်ကဒ်ကို DV-2021 ထီထဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ Green Card ကိုအနိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာဘာလဲ။ မည်သည့်ပုံစံများကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သနည်း။ DV Lottery ကိုရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ Green Card ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ - DV Lottery ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးပြီးရလဒ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနောက်ဤမေးခွန်းများသည်ကံကောင်းသူများကြားတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အဖြေတွေကိုရှာကြရအောင်။
DV Lottery ကိုအနိုင်ရခြင်းသည်သင့်အား Green Card အလိုအလျောက်မပေးသော်လည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားရန်သင့်အားအခွင့်အရေးပေးသည်။ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများသည်သင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုရလဒ်များ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုအစရှိသည်တို့ကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ သင်၏အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်သံရုံးသို့မဟုတ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင်လူတွေ့မေးမြန်းခံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ စီစဉ်ထားသည့်အချိန်ကိုသင့်အားကြိုတင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းကိုမိသားစုဝင်အားလုံးတက်ရောက်ရမည်။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအစတွင်အမှန်တရားနှင့်အမှန်တရားကိုသာပြောရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျိန်ဆိုရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်အဓိကလျှောက်ထားသူထံမှမေးခွန်းများကိုသူ့မိသားစု ၀ င်များအားမေးလေ့ရှိသည်။ အင်တာဗျူးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။ အတိုချုပ်ဖြေပါ။ မလိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမထည့်ပါနှင့်။ ကောင်စစ်ဝန်အရာရှိမှတောင်းဆိုသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသာပေးပါ။ အင်တာဗျူးဖြေဖို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့မလိုပါဘူး
ပထမ ဦး စွာ၊ ထီတွင်သင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုကိုအမေရိကန်သို့ယူဆောင်လာမည်ဆိုပါကသင်၏အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဘယ်လောက်ကြာကြာသိခဲ့ကြပြီလဲ။ အဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်အတူတကွနှင့်ဘယ်မှာနေသလဲ? သူတို့မတိုင်မီလက်ထပ်ခဲ့ကြပါက? အခြားကလေးများရှိရင်?
သင်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိမည်မှာသေချာပါသည်။ ဘယ်ရောက်မှာလဲ။ ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်မလဲ အဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်အလုပ်လုပ်ပါ့မလား
ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသည်သင်၏ပညာရေး၊ အရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ အမေရိကတွင်နေထိုင်လိုပါသလားဟုကလေးများအားများသောအားဖြင့်မေးမြန်းလေ့ရှိသည်။
သင်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ပြည်နယ်အတွက် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဘဲမည်သည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုမျှတောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်အောက်ပါသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပေးနိုင်သည်။
- ငွေစုပမာဏနှင့်စုဆောင်းထားသည့်ကာလများပါ ၀ င်သည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ဘဏ်စာရင်း။ - ယူအက်စ်သို့လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများပိုင်ဆိုင်ခြင်း။ - US တွင်နေထိုင်သောသင်၏ဆွေမျိုးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေကလက်မှတ်ထိုးထားသောအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့။ - အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်၊ ရှေ့နေသို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူမှပြုလုပ်သောပစ္စည်းတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း။ - အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်။
ကြိုတင်စီစဉ်ပါ သင်အင်တာဗျူးအတွက်သင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ သင်ပြောမည့်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုအလျင်အမြန်သွားနိုင်သည်။ သင်၏ဗဟုသုတကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ပါ။ အသေးစိတ်အားဖြင့်စဉ်းစားပါ။ လာမယ့်အင်တာဗျူးအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတာကောင်းတယ်။ အင်တာဗျူးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါကောင်စစ်ဝန်အရာရှိနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့၊ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ထားပါ။ အမေရိကန်လူမျိုးတစ် ဦး ၏စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကောင်း၏။
သင့်အသွင်အပြင်ကိုဂရုစိုက်ပါ။ ပုံပန်းသဏ္andာန်နှင့်အမူအကျင့်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းတို့သည်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကျစ်လစ်သောဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည် သာ၍ ကောင်းသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကရိုးရိုးဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ပေါင်းစပ်။ Jumper သို့မဟုတ် unassuming ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဝတ်စုံများသို့မဟုတ်တင်းကျပ်သော ၀ တ်စုံများကိုနှစ်သက်သင့်သည်။
ယုံကြည်မှုရှိပါ။ ဖော်ရွေပါ၊ မေးခွန်းများကိုတိုက်ရိုက်အတိုချုပ်ဖြေဆိုပါ။ စကားလုံးများကိုမျိုချခြင်းသို့မဟုတ်နောက်တဖန်မတောင်းဘဲကျယ်လောင်စွာပြောဆိုပါ။ ရှည်လျားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသို့မဟုတ်ဖြေဆိုရန်ငြင်းဆန်ခြင်းသည်ပြန်မရသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါနှင့် - သူတို့သည် ဦး ဆောင်သင့်သည်။